တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. Chen Hao အားလက်ခံတွေ | cincds
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. Chen Hao အားလက်ခံတွေ
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်ပါတီကော်မတီ၊ အတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. Chen Hao တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများအပြန်အလှန် ပေးအပ်ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့် အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျနှငျ့ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၊ ယူနနျပွညျနယျပါတီကျောမတီ၊ အတှငျးရေးမှူး H.E. Mr. Chen Hao တို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြားအပွနျအလှနျ ပေးအပျပွီး တကျရောကျလာကွသူမြားနှငျ့ အတူ စုပေါငျးဓာတျပုံရိုကျခဲ့ကွကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။